प्रजजन क्षमता र उर्वराशक्ति बढाउन के गर्नुपर्छ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
प्रजजन क्षमता र उर्वराशक्ति बढाउन के गर्नुपर्छ?
तपाईँको विवाह भएको केहि वर्ष भयो र अब सन्तान जन्माउने बेला भएको जस्तो महशुस गर्नुभयो। अनि तपाईँ आफ्नो उर्वराशक्तिलाई बढाउन चाहनुहुन्छ, के गर्दा उचित होला?
सुरुमा त, सही तरिकाले खानुहोस्!
करीब ३० प्रतिशत (लगभग एक तिहाई) जति बाँझोपनाको समस्या ‘तौलको असमानता’ले गर्दा हुने अमेरिकाको ‘नेशनल इनफर्टिलिटी एशोसियसन’ले हालै मात्र उल्लेख गरेको छ। जसमा महिलाको तौल कि त बढि रहेको कि चाहिँ कमि रहेको उक्त एशोसियसनले उल्लेख गरेको छ।
तौलले धेरै फरक पार्दछ, किनभने केवल ५ प्रतिशतले मात्रै तौलमा नियन्त्रण भयो भने गर्भवति हुन सक्ने सम्भावना २२ प्रतिशतले बढ्दछ। साथै, १८.५ भन्दा कमि बिएमआइ (BMI- Body Mass Index) भएका महिलाहरूमा धेरै समस्याहरू आउन सक्छन्, जस्तै; भ्रूणको वृद्धिमा समस्या, प्रसवावस्थाको बेलामा समस्या।
बिएमआइ भनेको तपाईँको तौल र उचाइको वर्ग (Square) को अनुपात हो। १८.५ देखि २५ सम्मको बिएमआइलाई सामान्य मानिन्छ भने २५ भन्दा बढि भएमा ‘मोटोपना’ र १८.५ भन्दा कम भएमा ‘कम तौल’ भएको मानिन्छ।
यसको मतलब, पोषण र उर्वराशक्तिको बीचमा गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ।
यदि तपाईँको तौल बढि छ र घटाउन चाहनुहुन्छ भने, अनुशासित हिसाबले नियमित रूपमा प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन र खनीज पदार्थको सेवन गर्नुपर्दछ। सुक्खा खानेकुराहरूले तपाईँको शरीरमा भएका गर्भावस्थाको लागि चाहिने पौष्टिक तत्वहरूलाई सोस्ने गर्दछ। याद गर्नुहोला कि, स्वासप्रश्वास र पाचनप्रक्रिया जस्तै प्रजननप्रक्रिया पनि शरीरको महत्वपूर्ण हिस्सा हो, जसको लागि पर्याप्त मात्रामा पौष्टिक तत्वको जरुरत पर्दछ।
अर्को कुरा, सही खाना खाएर मात्रै हुँदैन, सहि तरिकाले खानु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। यस्ता खानाहरू पनि खानुपर्दछ जसले भ्रूणको विकासमा मद्दत गर्दछ। गेडागुडी, अण्डा, दाल, अन्नको पीठो, हरियो सागपात जस्ता प्रशस्त फलाम पाइने खानेकुराहरूले बाँझोपना हुनबाट बचाउँदछ।
साथै, हार्वर्ड युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूले ‘फर्टिलिटी डायट’ (Fertility Diet) को सूची पनि तयार पारेका छन्। यसले उर्वराशक्तिलाई ६६ प्रतिशतले बढाउने अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबी रहेको छ। यस डायटमा निम्न पौष्टिक तत्वहरू पर्दछन्ः
धेरै मात्रामा राम्रो बोसो (जैतूनको तेल, अवोकाडोको तेल)
धेरै मात्रामा वनस्पति प्रोटिन (दाल) र थोरै मात्रामा जनावरको प्रोटिन (कुखुराको मासु, मटन, पोर्क, आदि)
धेरै मात्रामा फाइबर (आलु, फलफूल, गेडागुडी, बदाम, आदि)
विभिन्न प्रकारका भिटामिनहरू
शाकाहरी फलामको श्रोत
पुरुषहरूले पनि आफ्नो खानेबानी सुधार्नुपर्दछः
महिलाहरूले मात्रै होइन, पुरुषहरूले पनि आफ्नो खानेबानीमा सुधार ल्याउनु जरुरी हुन्छ। किनभने मोटोपनाले टेस्टोस्टेरोन र अन्य हरमोनलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ। भन्नाले शुक्रकीटको मात्रामा कमि हुनु, उर्वराशक्तिमा कमि हुनु जस्ता समस्याहरू मोटोपनाले ल्याउँदछ।
आफ्नो सन्तानको लागि आफैले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। नयाँ जीवनको सिर्जना गर्ने क्रममा आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि ख्याल गर्नुपर्दछ। के खाने, कसरी खाने भन्ने कुराको साथै आफ्नो तौलमा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्दछ।
पुरुषले नखानुस् यी ५ खाना
Previousआगो ताप्दा जलेर मृत्यु
Nextनेपालले भारतसामु प्रस्तुत गर्यो १७० रनको लक्ष्य